အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ၂၀၁၈ ဧပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Choice » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ၂၀၁၈ ဧပြီ
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ၂၀၁၈ ဧပြီ
– မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတသစ် ဦးဝင်းမြင့်၏ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ကျမ်းကျိန်သတင်း။
– Burmese American Medical Association ၏နှစ်ပတ်လည်ညစာစားပွဲသတင်း။
– ဧပြီအလှပန်း မေလင်းဖြူ။
– မသန္တာအောင်(ဆေးပညာဘွဲ့)၏ အရိုးပွ၊ အရိုးကျိုးရောဂါ။
– ဒေါက်တာအောင်ဇော်ထိုက်၏ တိရစ္ဆာန်မှကူးစက်သောရောဂါများ။
– ဆရာထွန်း(တဆ-၂၂၂၁)- ဆေးဖက်ဝင်ကမ်းဇော်ဆီ။
– ဆရာမျိုးမြင့်ကျော်ရဲ့ အင်္ဂင်္လိပ်စာသင်္ခန်းစာဆောင်းပါး။
– မောင်မိုးညိုရဲ့ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ခဲ့သော် အသိပညာပေးဆောင်းပါး။
– တိမ်မည်းရဲ့ အဝေးရောက်အလုပ်ခွင် ဆောင်းပါး။
လစဉ်ဖော်ပြနေကျ ကဗျာ၊ ကာတွန်း၊ ဓာတ်ပုံအက်ဆေး၊ ဗေဒင်၊ ဟင်းချက်နည်း သုတ၊ ရသစုံလင်စွာဖြင့် သင်္ကြန်အကြို ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဧပြီလထုတ် မြန်မာ့ဂဇက်ထွက်နေပါပြီ။
နီးစပ်ရာမြန်မာစတိုးဆိုင်များ၊ မြန်မာဆေးခန်းများမှာ အခမဲ့ရယူပါ..။
အိန္ဒိယမှာ ကလေးမုဒိန်းမှု.. သေဒဏ်…တဲ့..။
နောင်အနှစ် ၂သောင်းအထိ လူနေ၍မရ…တဲ့..။ လုပ်ချင်ဦးဟဲ့.. နူကလီယား..။
တိုင်းပြည်ရဲ့ အဆင်တန်ဆာ..ပြည့်တန်ဆာ.. အမွေအနှစ်အသစ်များ.. ခေါ်ကုန်ပြီ…။
ကကြီးတို့ တိုင်းပြည်ဇတ်လမ်းနောက်ကွယ်က.. လက်ဖြူလက်မဲကြီးများ..။
တောင်ကကြီးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အမေရိကား-အိမ်ဖြူတော်ကို တလောကလာခဲ့တာရယ် ..
လာမယ့်.. မေအကုန်..ဇွန်လောက်မှာ ထရမ့်နဲ့ ကင်မ်တို့ တွေ့မှာရယ်..။
ဒီအဖြစ် ၄ ခုကိုတွက်ကြည့်ရင်.. ဒီကစားပွဲဟာ.. ချိုင်းနား-အမေရိကား ကစားပွဲစစ်စစ်လို့ပဲမြင်မိတယ်..။
သမ္မတဖြစ်ကာစ.. အူကြောင်ကြောင်နဲ့.. TPP ကောက်ထွက်ထားတဲ့ ထရမ့်ဟာ.. အရှေ့အာရှရဲ့.. ဓနနဲ့ စစ်အင်အားနဲ့ သူတို့အားပြိုင်မှုကို သေသေချာချာ စာမကြေနေဘူးလို့ထင်ရပုံရှိပါတယ်..။
ဒါပေမယ့်.. သူက..မွေးရာပါ အရင်းရှင်စီးပွားရေးသမားကြီးမို့.. အမေရိကန်ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရာမှာတော့.. ဆြာကြီးဖြစ်လောက်ပါတယ်..။
စားကုန်ပြီ.. စားကုန်ပြီ..။ ပလပ်စတစ်တွေစားကုန်ပြီ…တဲ့.
ရိုဟင်ဂျာ-မြန်မာအပေါ်.. ဇက်ကာဘတ်ရဲ့ အမြင်.. ၁။၂။၃
မာ့ခ်ဇတ်ကာဘတ်ဂ် တုံ့ပြန် တာကတော့ …..
“ကျနော်တို့ ကြိုးစား နေပါတယ်။ အတိအကျ ပြောရရင် ကျနော်တို့ လုပ်ဆောင် နေတာ ၃ မျိုး ရှိတယ်။ ပထမ တစ်ချက်ကတော့ မြန်မာ စကားပြောဆို နားလည်တဲ့ စောင့်ကြည်သူတွေ ကို ဒါဇင်နဲ့ ချီပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကုမ္ပဏီက ထပ်မံ ငှားရမ်း အလုပ်ခန့် နေပါတယ်။
ဒုတိယ တစ်ချက်ကတော့ အမုန်း တရား ဖြန့်ချီသူတွေဟာ ဘယ်သူတွေလည်း ဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံထဲက အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ပါတယ်၊ တင်လာတဲ့ ပို့စ်တချို့ကို ဖြုတ်ချဖို့ မဟုတ်ပဲ အကောင့် တစ်ခုလုံး ပိတ်ပစ် နိုင်အောင်လို့ပါ။
တတိယ တစ်ချက် ကတော့ …. မြန်မာ နိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လို့ အနာဂတ်မှာလည်း ဒီလို ကိစ္စမျိုးတွေကို တင်ကြို ဟန့်တားနိုင်တဲ့ နည်းပညာ ဆိုင်ရာ ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲဖို့ လုပ်ဆောင် နေတယ်” ဆိုပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပိုင်ရှင် မစ္စတာ ဇတ်ကာဘတ်ဂ်က ပြောသွားပါတယ်။
သူက ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေဖက်ကပ်တည်လှုပ်ရှားတယ်..။ ထိုင်းတရားရုံးက..ဒီလိုပြန်လုပ်တယ်..။